Michael Keatin: 2018 waxaan ka qeybqaadan doonnaa Shaqo Abuurka Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Michael Keatin: 2018 waxaan ka qeybqaadan doonnaa Shaqo Abuurka Soomaaliya
MUQDISHO – Wakiilka Ergayga Xoghayah guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa si weyn ugu ammaanay dowladda Federaalka Soomaaliya horumarrada dhanka xasilloonida iyo la dagaallanka ururka Al-Shabaab.
Qaramada Midoobay ayaa qiimeyn ay sameysay sanadkan sii-dhamaanaya ku sheegtay in Soomaaliya ay ku guuleysatay la dagaalanka Musuqmaasuqa.
Michael Keating ayaa walaac ka muujiyay inay xaalad bini;aaddannimo ee dalku aad uga sii darto taasoo shacabka dhibaatooyin uga timado kooxaha xagjirka ah.
Dhanka kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ee 2017-ka uu Soomaaliya u ahaa mid wanaagsan,sanadka 2018 kana uu rajeynayo in guulo wax ku ool ah loona abuuro fursado shaqo,gaar ahaana dhalinyarada Soomaaliyeed.
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa kaalin mug leh kaga jira fursada shaqo ee ay helaan bulshada Soomaaliyeed,qeybaheeda kala duwan,wuxuuna sanadkan faa’ideysiga kooxaha xagjirka ah iyo ku dhiirashada Tahriibta.